ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်း နိုင်ငံေ ရးခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှတက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား « Burma Democratic Concern (BDC)
ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်း နိုင်ငံေ ရးခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်း အမျိုး သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှတက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းမှမြန်မာနိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံပြန်လည် တည်ဆောက်ရေးဖြစ်စဉ်တစ်ခုအနေဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာပါတီခေါင်းဆောင်များ ၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် သင်တန်းများပေးလျှက်ရှိရာယခုအသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းလိုက်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင်များနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ၊ ပြည်နယ် နှင့် ခရိုင် အလုပ်မှုဆောင်စုစုပေါင်း ( ၁၁၃ ) ဦးကိုရန်ကုန်မြို့ မဟာဗန္ဗုလလမ်း နှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့် YMCA ခန်းမ၌ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်စွမ်းရည်မြင့်သင်တန်းကို ၁၁ – ၃ ၂၀၁၃မှ၁၇-၃-၂၀၁၃ထိဆွေးနွေးပို့ချသွားခဲ့ပြီးယနေ့(၁၇.၃.၂၀၁၂)တွင်သင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။သင်တန်းတက်ရောက်သူများမှာကချင်ပြည်နယ်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်း ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ နာဂကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ မန္တလေးတိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှဖြစ်ကြသည်။ သင်တန်းဆင်းပွဲသို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှတက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီးသင်တန်းသားအသီးသီးကိုသင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ခဲ့သည်။နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင်ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းသည် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်အာဏာပိုင်များ၏ ဖိနှိပ်မှု အခက်အခဲကြားမှ ရုန်းကန်ခဲ့ရသောသင်တန်းကျောင်းဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီကွန်ယက်၊ပညာရေးကွန်ယက်တို့ကိုမွေးဖွားပေးခဲ့သောသင်တန်းကျောင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်အကြောင်း၊ယခုအသစ်ရွေးချယ်ခံရသောခေါင်းဆောင်များသည် ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းမှပေးလိုက်သောနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ၊အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ၊စီမံခန့်ခွဲမှုပိုင်းဆိုင်ရာ၊အသိဥာဏ်ပညာနှင့်စွမ်းရည်များကိုမြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီရေးအတွက်မိမိတို့ဒေသများအတွက် ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချရန်လိုအပ်ကြောင်းသင်တန်းတွင်ပါဝင်သော ဘာသာရပ်များကိုလေ့လာကြည့်ရာလက်တွေ့အသုံးဝင် သော၊ လက်ရှိအခြေအနေအတွက်လိုအပ်နေသောဘာသာရပ်များဖြစ်ကြောင်းဥပမာ- ယခုဖြစ်ပွားနေသောလယ်ယာပြဿနာများနှင့်ပါတ်သတ်၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသင်ကြားပေးခြင်း၊ ပြည်ထောင်စုအရေးနှင့် ပါတ်သတ်၍ Federalism အကြောင်းသင်ကြားပေးခြင်း၊ Ethnic Issue တိုင်းရင်းသားအရေးကိုသင်ကြားပေးခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် အလေးထားပြောကြားနေသော Women Leadership အကြောင်း၊ Education Policy အကြောင်းသင်ကြားပေးခြင်းအစရှိသည့် သင်ကြားပို့ချပေးခဲ့သည့်ဘာသာရပ် (၂၈)ခုမှ တစ်ခုချင်းစီ၏ လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ကိုက်ညီပုံ၊ အသုံးဝင်ပုံနှင့် မည်သို့အသုံးချရမည်ကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းသည် မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သည့်အတွက် ၀ိုင်းဝန်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ဗေဒါသင်တန်းကျောင်း၏ ဦးဆောင်ဒါရိုက်တာဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းမှ သင်တန်းပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ဗေဒါ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပြီးသင်တန်းသူ၊ သင်တန်းသားများဖြစ်ကြသောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဥက္ကဌဒေါ်ခင်မိုးမိုး၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်ကချင်ပြည်နယ် အလုပ် အမှုဆောင် အဖွဲ့ဥက္ကဌဦးဇော်လွင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုကော်မတီဝင်များဖြစ်ကြသောဦးနောင်နဂျာတန်၊ဦးစိုင်းဝင်းမြင့်၊ဦးအင်ထုံးခါးနော်ဆမ်တန်တို့မှ သင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ကျေးဇူးတင်စကား ၊ မှတ်ချက်များပြောကြားခဲ့ပြီးနာယကကြီးဦးတင်ဦးမှသင်တန်းသားအသီးသီးအားသင်တန်းဆင်းလက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် အခမ်းအနားအစီအစဉ်ကိုရုပ်သိမ်းခဲ့သည်။ သင်တန်းတွင် သင်ကြားခဲ့သောဘာသာရပ်များမှာ-
1. Comparative Study of Constitutions
4. Political Institutions
8. International System
9. Domestic Legal System
11. China&ASEAN Study
12. ASEAN Chairmanship, ASEAN Economic Community & Challenges of Myanmar
14. Community Organizing / Mobilizing
16. Electoral Systems
17. Role of Library in Development
18. CSO, Democracy & Public Participation
19. Climate Change& Environment
20. Women Leadership
21. Ethnic Issue
22. Media Relation &Information Management
25. Office Administration
26. Brief History of Myanmar
27. ICT & Social Media
28. CSOs & NLD Analysis
သင်တန်းကိုမနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅း၃၀ နာရီအထိတစ်ရက်လျှင် (၄) ကြိမ် (၇) ရက်တိတိပို့ချခဲ့ပြီးစာသင်ချိန်စုစုပေါင်း ၄၉ နာရ်ီဖြစ်သည်။
ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းသည်ရိုးသားထက်မြက်၍တက်ကြွသောလူငယ်များကို နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ လူမှုရေးခေါင်းဆောင်၊ အသင်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ဒေသဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်၊ တိုင်းရင်းသာခေါင်းဆောင်များအဖြစ်နိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်ပြီးပညာပေးခြင်း၊စွမ်းရည်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်ပေးခြင်းစသည်တို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းသည် ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသောဒီမိုကရေစီ ဖြစ်ပေါ်မှုများကိုမျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်ပြီးနိုင်ငံရေးပေါ်လစီ၊ စီးပွားရေးပေါ်လစီ၊ပညာရေးပေါ်လစီအစရှိသည့် နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးပေါ်လစီများချမှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် နိုင်ငံရေးရာသုံးသပ်ချက်များ၊ အကြံပြုချက်များ၊ပေါ်လစီရေးရာသုံးသပ်ချက်များစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပြင် လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုစနစ်တကျ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် စစ်တမ်းများကောက်ယူခြင်း ၊ သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
ဗေဒါသင်တန်းကျောင်းသည်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ အစိုးရ၏ တာဝန်ခံမှု နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့အတွက် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဆင့်ဆင့်အားစောင့်ကြည့်မှု ၊ ဥပဒေပြုအာဏာလွှတ်တော်အဆင့်ဆင့်အား စောင့်ကြည့်မှု၊တရားစီရင်ရေးအဆင့်ဆင့်နှင့်ဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်နေသော အဖွဲ့အစည်းများအားစောင့်ကြည့်မှုတို့ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုသတင်းရရှိသည်။
အချိန်-၃:၃၀ မှ ၅း၃၀
အစီအစဉ်(၂)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၃)။ ။ဗေဒါနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်းဦးဆောင်ဒါရိုက်တာဦးမျိုးရန်နောင်သိန်းမှ သင်တန်းနှင့် ပါတ်သတ်၍ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၄)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင်ရှမ်းပြည်နယ်အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌသင်တန်းသူဒေါ်ခင်မိုးမိုးမှသင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၅)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ကချင်ပြည်နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ ဥက္ကဌသင်တန်းသားဦးဇော်လွင်မှ သင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၆)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ရှမ်းပြည်နယ်၊ အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှ သင်တန်းသား ဦးစိုင်းဝင်းမြင့်မှ သင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၇)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ကချင်ပြည်နယ်၊တနိုင်းမြို့နယ်မှ သင်တန်းသားဦးနောင်နဂျာတန်မှ သင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၈)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုကော်မတီဝင် ကချင်ပြည်နယ် ၊ မြစ်ကြီးနားမှသင်တန်းသားဦးအင်ထုံးခါးနော်ဆမ်သင်တန်းနှင့်ပါတ်သတ်၍ မှတ်ချက်ပေးပြောကြားခြင်း။
အစီအစဉ်(၉)။ ။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် နာယကကြီးဦးတင်ဦးမှ သင်တန်းဆင်းလက်မှတ်များပေးအပ်ခြင်း။
Tags: 1990 election, Aung San Suu Kyi, BAYDA, bdcburma.burma election, burma democracy burma democracy movements, Burma Democratic Concern (BDC), burma election, Burma Today Burmese Regime 2010 Election NCUB NLD (LA) Myanmar Myint Soe, Forum of Burmese in Europe, Keywords burmatoday burmese news burmanet aung san suu kyi berma bagan khit pyaing irrawaddy dvb no burmese dvb burmese news mizzima burmese the irrawaddy irrawady aung san suu burmese genocide buy bu, Myanmar, myo thein, Myo Yan Naung Thein, News Music Life Rubble Politics Family Photography Travel Art Personal Food Religion Christmas Holidays Movies Poetry Random Books Culture Love Thoughts Writing Photos Fashion Video Friends Events Vid, world news, Yes We Can
By Burma Democratic Concern (BDC) in Uncategorized on 18/03/2013 .
← BURMA: BAYDA Institute:To A Society of Conscience အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအ ဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်များစွမ်းရည်မြှင့်တ င်ရေးသင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား	BAYDA Institute Director – Myo Yan Naung Thein on Hot News Myanmar →
ယနေ့ သိစရာမှတ်စရာ ၂၅-၆-၂၀၁၈ ............................ ၁။ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင် ရေး… twitter.com/i/web/status/1…6minutes ago